लकडाउनपछि सेयर बजार बढ्ला ?
सम्झना घिमिरे काठमाडौं,१६ वैशाख
१ महिनाभन्दा लामाे समयदेखि मुलुक लकडाउनमा छ । लकडाउन अझै कति समय चल्छ, टुंगाे छैन । अब मुलुककाे अर्थतन्त्र के हुने हाे भन्ने विषयमा चिन्ता प्रकट भइरहेकाे छ । यसबाट सेयर बजारका लगानीकर्ताहरू पनि अहिले झस्किएका छन् ।
लामो समयदेखि सन्ताेषजनक नदेखिएकाे सेयर बजार परिसूचक नेप्से मंसिरयता उकालो लाग्दै थियाे । ३ महिनाको अवधिमा सेयर सुधारिएर एकै दिन १ हजार ६ सय ६८ को विन्दुमा समेत पुगेको थियो । तर, अब बजार खुलेपछि घाटा हुने त्रासमा छन् लगानीकर्ता ।
लामो समयसम्म बन्द रहँदा लगानीकर्तामा सेयर बजारप्रतिको विश्वास गुम्ने खतरा हुने भन्दै बजार खोल्नुपर्नेमा जाेड दिन्छन् सेयर बजारका जानकार अम्बिका पौडेल । उनी भन्छन्, लकडाउनमा अहिलेसम्म हामीले ५ खर्ब गुमाइसकेका छौँ । लगानीकर्तामा त्रास बढिरहेको छ । त्यसैले बजारप्रतिको विश्वास राखिरहन पनि बजार चाँडोभन्दा चाँडो खाेल्नुपर्छ ।’
सेयर खुलेपछि पनि कारोबारलाई सन्तुलित राख्न सेयर बढ्दा र घट्दा हुने सर्किट ब्रेकलाई ५ प्रतिशतको सीमामा राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
यता, स्टक ब्रोकर एसाेसिएसनका अध्यक्ष भरत रानाभाट पनि लकडाउनले सेयर लगानीकर्तालाई घाटा भएको भन्दै सबैभन्दा मारमा ब्रोकरहरू परेको बताउँछन् । त्यसैले नेप्से, धितोपत्र बोर्डले अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सेयर बजार खाेल्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ ।
पुँजी बजारविज्ञ डा. गोपाल भट्ट पनि पुँजी बजार क्षेत्रमा बिजनेस कन्ट्युनिटी र डिजास्टर प्लान नभएको भन्दै यसकाे ठूलो मार लगानीकर्ताले चुकाउनुपरेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, भारत, अमेरिकाजस्ता मुलुकमा यस्ता योजनाहरू छन्, त्यसैले लकडाउनले पुँजी बजार क्षेत्रलाई धेरै असर गर्न सकेको छैन । तर, नेपालमा त सरकारले नै सेयर बजारलाई महत्त्व नै दिएको छैन । हरेक कुरामा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा लकडाउनले लगानीकर्तालाई बढी असर गर्न सक्छ ।
उनले मुलुकमा नयाँ-नयाँ प्रविधिको विकास भइरहँदा सेयरबजारमा भने प्रविधि प्रयोगमा ल्याइए पनि त्यसको प्रभाव अझै देख्न नसकिएकाे बताए ।
नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज नेप्सेका सीईओ चन्द्रसिंह साउद भने लगानीकर्ता अनलाइनभन्दा अफलाइनमै सेयर काराेबार गर्ने देखिएकाले पनि प्रविधिको असर कम देखिएको बताउँछन् । नेप्सेले लकडाउनको अवधिमा पनि केही कामहरू गरिरहेको बताउँदै केही समयभित्रै आईटी पोलिसी डेभलप गर्ने बताए । साउद २६ गतेबाट भने बजार खुल्ने प्रवल सम्भावना रहेको बताउँछन् ।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना भने बैंकहरूसँग उचित समन्वय हुन नसकेकाले पनि लकडाउनको अवधिमा अनलाइन कारोबार गर्न नसकेको बताउँछन् ।
अहिले अनलाइनमा खरिद र बिक्री भएपछि ट्रेडको म्याचिङ हुन्छ, सेयर ट्रान्सफर गर्ने ईडीआईएस ब्रोकरले चलाए पनि कुनै कारोबार बैंकसँग इन्ट्रिग्रेसन हुन सकेको छैन । इन्ट्रिग्रेसनका कारण भएको थियो भने हाःफलाइन अनलाइन हुने थियो र हामीले लकडाउनको समयमा पनि सेयर कारोबार गर्न पाउने थियौँ । यसले गर्दा सेयरकारोबारलाई पूर्ण अनलाइन बनाउन सकेनौँ । अनलाइन बनाउन सकेको खण्डमा लकडाउनको समयमा पनि नेप्से खुल्न सक्थ्यो । अहिले नै पूर्ण रूपमा अनलाइनमा नगइसकेको हुनाले सेयर बजार खोल्ने हो भने सरकारको लकडाउन असफल हुन सक्छ , ढुंगानाले भने ।
त्यसैले क्रमश: सेडुलिङ गरेर खोल्ने कुरामा अर्थ मन्त्रालय, ब्रोकर कम्पनी, नेप्सेलगायत सरोकारवालाहरूसँग छलफल भइरहेको उनले बताए ।
नेपालमा लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि इन्डेक्स १ हजार २ सय ५१ अंकमा पुगेको थियो । विश्वको सेयर बजारकाे तुलनामा याे तल रहेकाे उनकाे भनाइ छ ।
कोरोना राेकथाम तथा नियन्त्रणमा अाएकाे खण्डमा भने सरकारसँगै लगानीकर्तामा पनि अात्मबल बढ्ने र नेप्से घट्ने सम्भावना न्यून हुने उनकाे ठम्याइ छ । अहिलेको अवस्थामा सुधार भए नेप्से सामान्य मात्र घट्ने ढुंगाना बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, बैंक, विकास बै‌क तथा जलविद्युत क्षेत्रमा धेरै असर गरेको छैन । कोरोनाको असर होटल क्षेत्रमा मात्र धेरै परेकाले काेरोनाले सेयरबजार क्षेत्रमा ठूलो जोखिम ल्याउन सक्दैन । त्यसैले ढुक्क हुनुस्, लकडाउनपछि पनि सfमान्य तरिकाले सेयरबजार चल्छ । आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख १६, २०७७, १४:२५:००